Agwaetiti Cayman weputara Mmemme Global Citizen Concierge
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Cayman Islands » Agwaetiti Cayman weputara Mmemme Global Citizen Concierge
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Cayman Islands • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ọ bụ ezie na ókèala ndị Cayman Islands ka mechiri emechi maka ikuku ụgbọ elu azụmahịa na njem ụgbọ mmiri n'oge a, agwaetiti Cayman nwere obi ụtọ ịkpọsa mwepụta nke Mmemme Ndị Na-ahụ Maka Citizmụaka Mba Nile (GCCP), ihe eji eme njem nlegharị anya nke emere maka ndị na-agagharị agagharị na dijitalụ na-achọ iji ohere mgbanwe nke ọrụ dịpụrụ adịpụ nyere. Dika otutu puku ulo oru choro ka ha debe ndi oru ha na ulo maka ọdịnihu, ndi okacha amara na ndi ezin’ulo nwere ike iweli ulo oru ha nke oma, site na ịhọrọ ibi na ịrụ ọrụ n’ime agwaetiti Cayman ruo afọ abụọ site na inweta Asambodo Citizen Global . Emeputara nke oma na October 21, 2020 ma nke ndi Cayman Islands Department of Tourism (CIDOT) kwadoro ya na ndi oru nke njem nleta ma na-akwado ngalaba gọọmentị, GCCP ga-enye ndi mmadu ogologo oge na ndi mmadu zuru oke mbata na opupu.
"Global Citizen Concierge na-enye ohere zuru oke maka ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ iji bie ndụ nke nrọ ha n'akụkụ oke ala anyị na n'etiti ndị Caymankind," ka Hon. Onye osote onye isi ala na Mịnịsta njem, Moses Kirkconnell. “Gọọmentị anyị enweela ihe ịga nke ọma n'agbanyeghị nsogbu ahụike zuru ụwa ọnụ ma anyị apụtawo dị ka ebe nchebe na Caribbean. Ugbu a karịa mgbe ọ bụla, azụmaahịa na-anabata mgbanwe nke ịdị adị dijitalụ, yana ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ mgbanwe nke ọdịdị na ibi ndụ. Ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ nwere ike nọrọ ugbu a ruo afọ abụọ ibi na ịrụ ọrụ na agwaetiti Cayman - na-eme ka usoro ihe omume ha dị itoolu na ise na Caymankindness dịghachi elu ma na-eme ka ọrụ ndụ ha na-adị na anyanwụ, ájá, oké osimiri na nchekwa na Cayman.
N’ụwa nile, ụlọ ọrụ ndị bụ isi ewerewo ụkpụrụ ọrụ ndị na-agbanwe agbanwe, na-enye ndị ọrụ ha ọrụ n’ebe ọ bụla ha pụrụ ịrụpụta ihe. Site na akụrụngwa klaasị ụwa na akụrụngwa mbụ, agwaetiti Cayman bụ ebe kachasị mma maka ndị na-agba nọmba dijitalụ. Citizensmụ amaala ụwa nwere ike ịmalite ụbọchị ha site na ịgagharị n'akụkụ asaa Mile Beach, snorkel na stingrays na mmiri doro anya nke Caribbean n'oge nri ehihie ma bụrụ "ụlọ maka nri abalị" na onyinye sitere na Culinary Isi Obodo nke mpaghara Caribbean kachasị mma. N'ịhapụ ịkọwa, ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ nwere ohere pụrụ iche iji mikpuo onwe ha n'ezie na ịtụnanya nke ndụ agwaetiti na agwaetiti Cayman.
A na-akpọ ndị njem nwere mmasị ịnweta Asambodo Citizen zuru ụwa ọnụ ka ha tinye akwụkwọ ntanetị. Ntuziaka maka GCCP kwuru ihe ndị a:
Ndị anamachọ ihe ga-enyerịrị leta na-egosi ihe akaebe banyere ọrụ ha na ụlọ ọrụ dị na mpụga agwaetiti Cayman na-ekwupụta ọkwa na ụgwọ ọnwa kwa afọ. Obere ego ịkwụ ụgwọ dị ka ndị a:
Ndị na-enyocha onye ọ bụla ga-enwerịrị ego opekata mpe nke US $ 100,000 maka otu ezinụlọ.
Onye anamachọ ihe ya na di ma ọ bụ nwunye ya / onye ọlụlụ ibe ya ga-enwerịrị opekata mpe ego ụlọ nke US $ 150,000 maka ezinụlọ mmadụ abụọ.
Onye anamachọ ya na di ma ọ bụ nwunye ya / onye ọlụlụ obodo ya na nwa ya ma ọ bụ ụmụaka ya ga-enwerịrị ego kacha nta nke US $ 180,000.
Onye anamachọihe nwere nwa ma ọ bụ ụmụaka nwere ntụkwasị obi ga-enwerịrị ego opekata mpe nke ụlọ US $ 180,000.
Foto onyonyo nke ezigbo foto akwukwọ akwụkwọ visa na visa, ọ bụrụ na ọ dị mkpa maka ndị niile na-enyocha ya. Biko pịa Ebe a ịchọta ozi visa kacha emelitere.
Akwụkwọ ndekọ aha ụlọ akụ.
Akaebe nke mkpuchi mkpuchi mkpuchi ahụike ugbu a maka ndị niile na-enyocha gị na ndị otu gị.
Ndị anamachọ ihe na ndị okenye toro eto ga-enyerịrị akwụkwọ nhichapụ / ndekọ ndị uwe ojii ma ọ bụ akwụkwọ yiri ya dabere na obodo onye anamachọ ya.
* A na-ewere onye dabere dị ka di ma ọ bụ nwunye, onye ọlụlụ / onye ọlụlụ, ndị mmekọ obodo, ndị nne na nna, nne na nna ochie, ụmụnne, ma ọ bụ ụmụaka ruo na ndebanye aha agụmakwụkwọ. Mụaka ga-edebanye aha na ụlọ akwụkwọ nzuzo nke obodo ma ọ bụ debanye aha na ụlọ akwụkwọ ụlọ.
Ego Asambodo Nwaamaala zuru ụwa ọnụ
Akwụkwọ ikike ụmụ amaala ụwa na-akwụ ụgwọ maka ndị 2: US $ 1,469 kwa afọ
Ego Asambodo Citizen zuru ụwa ọnụ maka onye ọ bụla dabere: US $ 500 kwa dabere, kwa afọ
Ego Nhazi Kaadị Ebe E Si Nweta: 7% nke ego ngwa ngwa